100W Na-aga n'Ugwu Yard Light Photocell China Manufacturer
Nkọwa:Ugwu Ugwu Ugwu Ochie,Ugwu Ugwu Uhie Yard,Enwee ike n'èzí n'èzí
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ > 100W Na-aga n&#39;Ugwu Yard Light Photocell
Ogologo Ugwu Ugwu anyị bia na ma ọ bụ ihe nkedo a na-edozi ma ọ bụ ihe nkedo aka nke aka na-ejikọta n'akụkụ aka nke osisi ahụ. Mfe ngwa ngwa dochie ihe ọ bụla metal halides / HPS / HID ntanye ma gbanwee ìhè ìhè. A na-enwerịta ihe ndị ọzọ na-adagharị, ogwe aka aka, na yoke / swivel kits dị maka ugwu Led Yard Light .
Ebube Na- acha Egwu N'èzí na- agụnye ihe ntanetị foto nke dusk-to-dawn. Ebube ọkọlọtọ anyị mere ka mmiri daa na photocells jiri bọmbụ na-egbuke egbuke nwere ihe dị egwu 130 lumens / W. Mmiri ọkụ nke 5000K (kelvin) na-acha ọcha na-acha ọcha maka oghere ndị na-adọba ụgbọala n'èzí, ogige egwuregwu na ámá egwuregwu, ọkụ ọkụ n'okporo ámá, ma ọ bụ ebe ọ bụla ị ga-eji ìhè 100w edu .
Ugwu Ugwu Ugwu Ochie Ugwu Ugwu Uhie Yard Enwee ike n'èzí n'èzí Ugwu Ufo Ugwu Ogwe Ugo Maka Ugo Ochie Ogige Ugwu Ogige Ugwu Ugwu Ogologo Enwu Igwe Uhie